Wholesale Samsung S21 Ultra UV Glue Yakadzikama Girazi Mugadziri uye Mutengesi | OTAO
Nei uchida gundi yegirazi yakatsamwa?
Mhando dzemhando dzeSamsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, uye VIVO dzese dzinoshandisa dzakakomberedzwa skrini ine rakakura rakakombama. Parizvino, chero girazi rinopisa rakakotama pasi rinozove nerimwe kana akawanda eanotevera matambudziko.
Vhara chikamu chekuratidzira nzvimbo kuruboshwe uye kurudyi mativi
Haugone kushandisa zvigunwe zvekuvhura basa kana kuvhura hakunyatso
Guruva rinodzika pasi pegirazi
Iko kune matema, machena macheto, kana matema anoonekwa mukati memazuva mashoma mushure mekunamatira
Vatengiwo zvavo havagone kutumira vega
OTAO's UV glue yakadzikama girazi inogadzirisa zvakakwana matambudziko aya.
Chii chinonzi UV Glue Yakatsamwa Girazi?
UV yakadzikama girazi package inouya nechinhu chinonzi LOCA gel. LOCA ipfupi fomu ye'Liquid Optically clear Adhesive). LOCA gel rinoshandiswa kunamira chivharo lens, girazi nezvimwe kumuviri wefoni uye sezvo iri yekunamatira yakajeka, ine yepamusoro oparesheni zvinhu. Sezvaunoshandisa Ultraviolet mwenje (UV) ku poresa iyo mvura UV glue, ava vanogadzira zvigadzirwa vakatanga kudaidza iyi 'UV girazi'.
Liquid optically yakajeka namira (LOCA) iri mvura-yakavakirwa bonding tekinoroji inoshandiswa mukubata mapaneru uye ekuratidzira zvishandiso kusunga iyo yekuvhara lens, plastiki, kana zvimwe zvigadzirwa zvemaziso kune iyo huru sensor unit kana imwe neimwe. Izvi zvinonamatira zvinovandudza hunaku uye kusimba. LOCA glue inowanzoomeswa uchishandisa ultraviolet mwenje.
Ungasarudza sei yakanaka UV glue yakatsamwa girazi?
UV glue yakadzora girazi yakatanga kuoneka muna 2018, asi kusvika zvino, zvigadzirwa zvakawanda pamusika zvine matambudziko anotevera
Izvo zvishongedzo zvakapararira uye kumisikidza kwakanetsa. Kamwe kana kukanganisa kukaitika, girazi rinogona kungoraswa (pikicha);
Iyo yekurapa nguva yakareba kwazvo (2 maminetsi);
Kana yangopora, zvinonetsa kubvarura. Semuenzaniso, kana girazi rako rakatsamwa rakatyoka netsaona uye richida kutsiviwa negirazi nyowani nyowani, unogona kukuvadza maoko ako (pikicha);
Glue rakapfachukira panguva yekumisikidzwa, kunamatira kune mabhatani epadivi, zvichikonzera chinyorwa (mufananidzo)
OTAO's UV glue yakadzikama girazi
Iyo yegirazi yekugadzira yakanyatsogadzirirwa UV girazi, iri nyore kuisa, chero munhu anogona kutanga nyore mushure mekuona yedu yekushandisa vhidhiyo. Saka zvigadzirwa zvedu zvinogona kutengeswa pamhepo uye pasiri pamhepo zvese zviri zviviri.
Uchishandisa iyo yazvino chizvarwa cheUVA glue, iyo yekurapa nguva inogona kupfupiswa kusvika 1 miniti.
Iyo yazvino UV glue inogona kubvarurwa nyore nyore kunyangwe mushure memwedzi mishoma yekushandisa mushure mekurapa, hakuzove nemasara, uye haizombokuvadza maoko ako.
Balance pad uye inobata donje dhizaini kuona kuti glue haizopfuuri panguva yegirazi maitiro
Samsung Cherechedzo 20 Ultra
Pashure: Samsung S21 Ultra 3D Inopisa-inokotama TPU Screen Mudziviriri
Zvadaro: iPhone 12 yakateedzana 2X inoputsika yakadzikama girazi screen mudziviriri